सर्वसाधारण प्रहरीको आँखा छल्दै ल’खर ल’खर, सङ्क्र’मित बढ्या’बढै – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/सर्वसाधारण प्रहरीको आँखा छल्दै ल’खर ल’खर, सङ्क्र’मित बढ्या’बढै
सर्वसाधारण प्रहरीको आँखा छल्दै ल’खर ल’खर, सङ्क्र’मित बढ्या’बढै
इनरुवा, २९ साउन । सुनसरीमा पछिल्लो केही दिन यता समुदायमा कोरो’नाको सङ्क्र’मण फैलिएको छ । सुनसरी र मोरङको प्रदेश र निकास द्धारको रुपमा रहेको इटहरीमा समुदाय स्तरमा को’रोना स’ङ्क्रमित बढ्न थालेको छ । सर्वसाधारणकै अटेरीका कारण समुदायमा कोरो’ना फैलिएको दा’बी गरिएको छ । समुदायमा कोरो’ना सङ्क्र’मित भेटिन थालेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको बैठकबाट निषे’धाज्ञा गर्ने निर्णय गरे पनि अधिकांश व्यापारीहरुले निर्णय मानेका छैनन् । त्यो सँगै सर्वसाधरणहरु पनि लखर लखर प्रहरीको आँखा छ’ल्दै हिँड्ने क्रम रोकिएको छैन ।
लक’डाउन शुरु भएपश्चात् पनि सडक बजारमा भिडभाड बढेको भन्दै इटहरीकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले गुनासो गर्नुभयो । सर्वसाधारण र व्यापारीले अटेर गर्दा कोरोना समुदायमा फैलिँदै गएको बताएकी हुन् । बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अटेरीपन देखाउँदा सम’स्या बढ्दै गएको उपमेयरको भनाइ छ । इटहरीमा जारी लक’डाउनमा सबै उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु बाहिरबाट ब’न्द गरे पनि भित्री रुपमा खोल्दा थप जो’खिम बढ्न थालेको छ । अहिले इटहरीमा को’रोना सङ्क्रम’णको दर बढ्दै गएको छ । कोरो’ना परीक्षण गर्न पिसिआर दिएर पनि हिँड्नाले थप जो’खिम बढाएको छ ।
इटहरीमा चिया पसलदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्ने खुल्लै रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहको लकडा’उन गर्ने निर्णयको अबज्ञा गर्दै इटहरीका प्रायः बैंकहरुले कर्मचारी बोलाएर आफ्नो गतिविधि जारी राखेका छन् । को’रोना सङ्क्र’मण रोक्न भन्दै गरिएको लक’डाउनमा बैंकहरु खुल्लै रहदा बैँकमा कार्यरत कर्मचारीहरु भने उच्च जो’खिममा परेका छन् । जिल्लाभर लक’डाउन भई निषे’धाज्ञा समेत जारी भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारी बोलाई आफ्नो गतिविधि जारी राखेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले समेत वडा कार्यालयहरु खुल्ला गरेर काम गराइरहेको छ । आप्mनै निर्णय विपरित उपमहानगरले कर्मचारीलाई बोलाएर काम गराइरहेको पाइएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आएकी एक महिलामा को’रोना सङ्क्र’मण देखिए पछि उनी बसेको बुद्ध चौकको एक होटल सिल गरिएको छ । उदयपुरबाट आन्द्राको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आइपुगेकी २३ वर्षीय महिलामा बुधबार आन्द्राको अप्रेसन गर्नुपुर्व पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरो’ना पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि उनी बसेको होटल सि’ल गरिएको धरान १८ का वडाध्यक्ष प्रवीण राईले बताउनुभयो । बिरा’मीमा कोरो’ना सङ्क्र’मण पुष्टि भएपछि बुद्ध चौकमा रहेको एक होटेललाई स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले सिल गरिएको र बिरामीलाई बीपीको आइसोलेसनमा भर्नाका लागि पठाइएको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहेताले बताउनुभयो ।
बुद्धचौक क्षेत्रको होटेलमा गएको साउन २१ गते देखि सङ्क्र’मित महिला बसेको हुनाले होटेल सञ्चालकसहित ८ जनाको बिहीबार स्वाब लिएको छ । को’रोना सङ्क्र’मित बसेका होटलसहित आसपासका ३ घरमा अहिले सेनिटाइज गर्नुको साथै सिल गरिएको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो । सो क्षेत्रमा हिँड्डुलमा क’डाइ गर्ने पनि बताइएको छ ।
उता धरान उपमहानगरपालिका ९ का २४ वर्षीय महिला वडासदस्यमा को’रोना पुष्टि भएको छ । उहाँको साउन २४ गते धरान १५ मा स्वाब संकलन गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिनुभयो । उता दुहबीमा थप तीन जनामा कोरो’ना सङ्क्र’मण पुष्टि भएको छ । सङ्क्र’मण पुष्टि भएकाहरूमा दुहबी नगरपालिका वडा नं. ६ का ६७ वर्षीय महिला, वडा नं. १० का ४२ वर्षीय पुरुष छन् । त्यसैगरी, दंगा गण दुहबीका ३५ वर्षीय पुरुष र ३२ वर्षीय पुरुष रहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख विन्देशरप्रसाद महतोले बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट